‘पाठक जहिले पनि फरकपन र दमदार साहित्य चाहन्छ’ : शीतल गिरी – Chitwan Post
‘पाठक जहिले पनि फरकपन र दमदार साहित्य चाहन्छ’ : शीतल गिरी
शीतल गिरी लेखक तथा अनुसन्धाता हुन् । उनी गहन पुस्तकहरु नै पढ्न रूचाउँछन् र त्यस्तै गहन विषयमा समेत गम्भीर तरिकाले कलम चलाउँछन् । विशेषगरी, उनको रूचिको क्षेत्र भनेको प्रागइतिहास, दर्शन र संस्कृति हो । उनको २०६३ सालमा छापिएको निबन्धसंग्रह ‘प्रशंगवश’ले उनको उच्च लेखकीय क्षमतालाई देखाउन सफल भएको छ । उनले एकल र सहलेखन गरेर हालसम्म आठवटा कृतिहरु प्रकाशन गरिसकेका छन् । प्रस्तुत छ, लेखक र अध्ययनलाई गहिरोसँग आत्मसात् गर्ने क्षमताका धनी स्रष्टा शीतल गिरीसँग चितवन पोष्टले गरेको स्रष्टासँग संवाद ः
– नेपाली लोकवार्ता नेपालको सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलन २०७५ साल असोज २२ गतेदेखि २९ गतेसम्म कपिलवस्तुको तौलिहवा, रुपन्देहीको बुटवल र नवलपरासीको त्रिवेणीधाममा आयोजना हँुदैछ । त्यहाँ प्रस्तुत गर्नका लागि “लोक विश्वासमा टुनामुना–मोहनी” विषयक कार्यपत्र तयार पारेँ । अब नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान दर्शन विभागको अनुसन्धान “साङ्ख्य दर्शनदेखि सत्यहाङ्मापन्थसम्म ः एक विहङ्गावलोकन” को अन्तिम खण्ड “जोसमनी सन्त–परम्परादेखि सत्यहामापन्थसम्म”मा जुटेको छु । सम्भवत अर्को वर्ष एउटा निबन्धसङ्ग्रह पनि पाठकमाझ ल्याउने विचार बनाएको हुँदा त्यसमा पनि समय दिँदैछु ।
२) बजारमा आख्यान र संस्मरणको शेरगुल खिलेको छ, यहाँ भने लोकवार्ता र निबन्ध विधामै व्यस्त हुनुहुन्छ, किन ?
– पहिलो कुरा त म प्रचारका लागि लेख्दिनँ । पौराणिक विषयमा लेखिएको आख्यानको पुस्तक “तपोधन” दसँैअघिसम्म सम्भवतः बजारमा आइपुग्छ । तपोधन पुराण र रामायण, महाभारतले बोलेजस्तै उपन्यास भने होइन । निश्चय नै पौरस्त्य साहित्यका धेरै सन्दर्भहरु छन् । उपन्यास कस्तोलाई भन्छन् भन्ने विषयमा निश्चित रुपको आफ्नो ज्ञान नभएको हुँदा यो कृति निबन्धजस्तो पनि लाग्न सक्छ कतिपयलाई । जता जति लम्ब्याए पनि हुने, छोट्याइदिए पनि कतै अङ्गभङ्ग नहुने विषयमा उपन्यास लेखँे । तर पनि प्राचीन कुरा कोट्याउने प्रयास गर्दा जुनकुनै बहाना वा कारण देखाएर यथार्थदेखि टाढा रहेर कोरा कल्पनाको भरमा साहित्य लेखन गरिनुहुन्न भन्ने कटुसत्य बुझेको हँुदा पालन गर्ने कोसिस गरेको छु । विश्वामित्र यथार्थ जगत्को वैज्ञानिक ऋषिहरुमध्ये एक हुन् । उनी यथार्थ संस्कृति परम्पराका स्रोत–पुरूष हुन् । उनले धरतीलाई स्वर्ग बनाउन चाहेका थिए । उनी देवजातिको एकाधिकार समाप्त गर्न चाहन्थे । यसकारण राजाहरु उनका विरोधी भए । स्वर्गको सुख भोगिरहेकाहरु विरोधी हुनु स्वाभाविकै हो । सबैले स्वर्गको सुख प्राप्त गरुन्, यो चाहन्नथे वशिष्ठ । हो, अहिले पनि देश र जनताको भलो चाहन खोज्ने एकाध राजनेतालाई वशिष्ठ स्वभाव भएकाहरु सबै मिलेर पाखा लगाउँदै छन्, यो सत्य हो ।
– साहित्यले हामीलाई सभ्य बनाउँछ, जिन्दगी राम्रो हुनसक्छ भनी सिकाउँछ । जिन्दगीमा जे हुनुपर्ने हो, त्यसतर्फ इङ्गित गर्दछ । लक्ष्य भेट्टाउने आकांक्षा हामीभित्र जगाउँछ । हाम्रा पूर्वजको जीवन धेरै अप्ठ्यारो थियो । यस कुराको कल्पना वर्तमानमा साहित्यमा लेखिन्छ । हाम्रा पूर्वजहरुका सम्मुख एउटा अज्ञात र खतरैखतराले भरिएको संसार थियो । उनीहरुलाई आवश्यक भोजन, प्रकृतिको अप्ठ्यारोबाट रक्षा, सिकार र सम्भोग नै जीवन लागेको हुँदो हो । जीवन सपना, प्रसन्नता र कल्पनाको उडान, एउटा आन्दोलनकारी योजना बन्यो होला । जीवन जिउने लालसा, परिवर्तन गर्ने चाहना, राम्रो बनाउने इच्छाले मह¤वाकांक्षा जन्मियो होला । वरपरका रहस्यहरुको भेदले फेन्टासी रचना गर्ने इच्छा जागृत भएको हुनुपर्छ । जब लेखन प्रारम्भ भयो, तब यो कहिल्यै नरोकिने प्रक्रिया अझ समृद्ध भयो यानि साहित्यमा स्थायित्व आयो । साहित्य मनोरञ्जनभन्दा धेरै कुरो हो, यो बौद्धिक कसरतमात्र होइन । यसले संवेदनालाई तिखार्छ र आलोचनालाई जागरूक बनाउँछ । सभ्यताको अस्तित्व कायम राख्नका लागि साहित्यको एकदम आवश्यकता पर्दछ । हामीभित्र जुन सर्वोत्तम छ, त्यो बचाउन र सम्हाल्नका लागि साहित्य हुनु एकदम आवश्यक छ । किनभने पुनः हामी एकाङ्कीपनको पशुतातर्फ नफर्कियौँ, जीवन विशेषज्ञहरुको प्रयोजन मुलुकमा खुम्चिएर नरहोस्, जहाँ वस्तुलाई एउटा खास कुनाबाट मात्र हेर्ने गरिन्छ । वातावरणमा त्यसको वरपर, अगाडि–पछाडि जेजति हुन्छ उपेक्षापूर्वक छाड्ने गर्दछ । जुन मेसिन मानिसको सुखसुविधाका लागि आविष्कृत गरिएको छ, हामी त्यसको गुलाम बन्नुभएन । साहित्य नभएको संसार इच्छाविहीन, आदर्श नभएको अश्रद्धाको हुनेछ । रोबोटको संसार हुनेछ । साहित्यले हामीलाई गन्तव्यमा पु¥याउँछ । हामीलाई अरुसँग सम्पर्क गराउँछ । यसले हाम्रो सपनालाई साकार गर्ने शक्ति दिन्छ ।
– जीवन बुझ्नु सहज छ जस्तो मलाई लाग्दैन । उमेरअनुसार जीवनप्रतिको चाहना फरक हुन्छ र समय तथा परिस्थितिले पनि असर पारेको हुन्छ । हो, किशोर अवस्थामा राम्रा पुस्तक पढ्दा यस्तै लेख्न सकूँ यस्तो भावना मनमा नपलाएको होइन । साथै, नलेखेको पनि होइन । फगत् त्यो लहड थियो, हरायो र गयो । मनका कुरा अभिव्यक्त गर्न मानिसले माध्यम खोजिरहन्छ र मैले चित्रकलालाई अपनाएको थिएँ, युवावस्थामा । मैले बनाएका चित्रहरु अहिले मसँग नभए पनि केहीका घरमा र करिब २५ भन्दा बढी चित्र गौरको कलाकुञ्ज पुस्तकालयमा अझसम्म छ । रह्यो लेखक बन्ने कुरा– संगत, साधनाले बन्न पुगेको हुँ । लेख्दै जाँदा केही फरक किसिमबाट लेख्ने गरेको कारणले पनि आजको यो अवस्थामा आइपुगेको हुँ । हो, म अहिलेसम्म मञ्चमा सुनाउनका लागि कविता लेखिरहन्थेँ भने सायद् यो स्थान बनाउन सक्ने थिइनँ, जुन आज छ । अध्ययन र लेखनमा साधना गरेको फल हो, यो । सबभन्दा ठूलो कुरो त अध्ययन गरेको कुरो पचाएर आफ्नो बनाएर लेख्न सक्ने सफल लेखक बन्दछन्, म त्यसतर्फ पाइला सार्ने प्रयत्न भर्खर गर्न थालेको छु ।
५) नेपाली साहित्य केकति कारणले नेपाली सीमाबाहिर निस्कन नसकेको हो ?
– नेपालमा नक्कल गर्ने प्रचलन हिजो पनि थियो र आज पनि छ । जबसम्म आफ्नोपन नेपाली साहित्यमा हुँदैन या लेखिँदैन, तबसम्म विश्वबजारमा टाउको उठाउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हो, हामी यस कुरामा भने सारै गरिब छौँ, हाम्रो आफ्नोपन भएको राम्रो साहित्य विदेशकाले सहजै बुझ्न र पाउन सक्ने गरी उपलब्ध गराउन भने सकेका छैनौँ । यो हाम्रो कमजोरी पनि हो, यो कमजोरीको कारण मैले देखेअनुसार यस्तो रहेको छ ः १. हामीकहाँ सुसम्पन्न प्रकाशन गृहको अभाव छ । २. असल कृति चयनकर्ताको खडेरी छ । ३. हामीले विश्वव्यापी प्रचारप्रसार अभियान अहिलेसम्म चलाउन सकेका छैनौँ । ४. इन्टरनेटमा राम्रो पहुँच असल कृतिले पाउन सकेको छैन । ५. सबभन्दा ठूलो कुरा त सुयोग्य अनुवादकको अभाव नै हो ।
६) राज्यको उपस्थिति भएका संस्थामा सिर्जनात्मक साहित्यिक गतिविधिहरु र गुणवत्ता किन कम भएका होलान् ?
– यसबारे बोल्नेभन्दा पनि धेरैले देखेभोगेका कुरा हुन् । हिजोको मापन र आजको मापन फरक छ । हिजो क्षमता भएकाहरुको उपस्थिति राज्यले चलाएको संस्थामा थियो । पञ्चायतलाई जतिसुकै गाली गरे पनि लाजगालले देखाउनकै लागि भने पनि योग्य व्यक्ति लगेका थिए, लैजान्थे । आजको स्थिति कोटा सिस्टम हो, भागबन्डा हो । यहाँ राम्रो हैन, हाम्रो हेरिन्छ । गएकाहरु अधिकांश गुणवत्ता नभएका छन् र उनीहरुले प्राज्ञिक अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पनि योग्यलाई नभएर भागबन्डाको आधारमा बाँड्छन् भने त्यस ठाउँमा तपाईंले गुणवत्ता कसरी पाउन सक्नुहुन्छ ?
७) क्रोनिक रोगीझैँ भएका या सेतो हात्तीझैँ लाग्ने साझा र एकेडेमीहरु अब राज्यले पालेर कहिलेसम्म बस्ने होला ?
– राज्यले पाल्नेभन्दा पनि भाषासाहित्य राज्यको गरिमा हो, गहना हो र गौरव हो । जहाँ राज्य चलाउनेले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको हँुदैन, त्यहाँको साहित्य विश्वसाहित्यको आँगनमा मुस्कुराइरहेको हामी पाउछौँ । जहाँ राज्यले श्वेत आतङ्क लादेको हुन्छ, त्यहाँ लेखिएको साहित्य पनि शिर ठाडो पारेर हाँक दिइरहेको देखिन्छ । नेपालको परिस्थिति भने फरक छ । स्थिर सरकारको अभावमा, चाकरीबाज नजराना चढाएर, पहुँचका आधारमा पुग्नाको परिणामबारे तपाईं बोल्दै हुनुहुन्छ । अक्षरलाई माया गर्ने व्यक्तिहरुले छानेको व्यक्तिलाई सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ, अहिले यस्तो हुनसकेको छैन । साझामा साहित्यकारहरुको विश्वासको मतको कदर गर्ने एक व्यक्ति डा. विजय सुब्बा देखिनुभएको छ, जसले भ्रष्टहरुको सातो लिँदै हुनुहुन्छ । यस्ता संस्थाहरुको आवश्यकता राज्यलाई छ, राज्यले गतिलो नीतिनियम बनाएर साहित्यकारहरुलाई सुम्पिनुपर्छ ।
८) बजारवादको हल्लालाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?
– हाम्रा पूर्वजकै अनुभव हो– “बोल्नेको पिठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन ।” साहित्यकार र प्रकाशकको पनि दायित्व हो, छापिएका पुस्तक सबैको पहुँचसम्म पु¥याउने प्रयत्न गर्नु । सामान्यरुपमा राम्रा प्रकाशन गृह सबैले गर्दैछन् र गर्नु पनि पर्छ । पाठक जहिले पनि फरकपन चाहन्छ, दमदार चाहन्छ । यसो भएको हुँदा केही अतिवादीले भने बजारमा सुनियोजित किसिमले हल्ला फैलाउने गरेका छन् । यस्तो लेखन प्रवृत्तिले मौलिक लेखन प्रवृत्तिलाई मार्न सक्दैन । यदि मौलिक लेखनमा दम छ भने केही समय पछाडि परेको जस्तो देखिएला तर टिक्छ । साहित्य भनेर लेखिएका सम्पूर्ण कृति गतिलै छन्, दमदारै छन् भनेर म भन्दिनँ । प्रेसलाई काम दिनुलाई नै साहित्य हो भनेर मान्ने पक्षमा म छैन । धेरै हल्ला चलाएपछि, राम्रो भनेर पैसामा बिकेका समालोचकले लेखिदिएपछि नराम्रो कुरा पनि राम्रो मानिने र बजारमा सहजै उपलब्ध गराउन नसकेपछि या चल्तीका समालोचकले राम्रो नभनिदिएपछि राम्रो पुस्तक पनि नराम्रो मानिने प्रचलन पहिले पनि थियो, अहिले पनि छँदैछ । साहित्य भनेको कलाकै रुप हो । कलात्मक भएको हुँदा ५÷६ हजार वर्षपहिलेको गायत्री छन्दको सावित्री मन्त्र (जसलाई गायत्री मन्त्र भनिन्छ हिजोआज) अहिले पनि प्रचलनमा छ । महाकवि कालिदासको मेघदूतको चर्चा चलेकै छ अझै पनि, कुनै उदाहरण दिन प¥यो भने मुनामदनको पंक्ति अघि सार्छौं हामी । तपाईं नै सोच्नुस्, मुनामदनबाट उदाहरण दिनमिल्ने १५÷२० पंक्ति निकालिदियौँ भने के नै बँच्छ र ? हो, त्यस्तो एक पंक्ति पनि रच्न नसक्ने टिक्दैन, उनीहरुले भर्खरै लेखेको रचना पनि क्षमताको आधारमा पुरानो हो र रद्दीको टोकरीमा थन्किन्छ । साहित्यले साधना खोज्छ, साहित्यमा वस्तुको अत्यधिक सुन्दर, प्रभावोत्पादक तथा प्रभावशाली कथनपद्धति भने हुनैपर्दछ, साहित्यको मह¤व यसैमा छ ।
९) अहिलेसम्म यहाँका केकति पुस्तकहरु प्रकाशित भए ? अब केके प्रकाशन गर्ने चाँजो मिलाउँदै हुनुहुन्छ ?
– अहिलेसम्मका मेरा प्रकाशित कृतिहरु ६ वटा छन् । ती कृतिहरु महाकाली (कवितासङ्ग्रह) २०४५, जनताकी छोरी (खण्डकाव्य) सहलेखन, पत्रमित्रता युगको आवश्यकता (निबन्धसङ्ग्रह) २०५५, प्रसंगवश (निबन्धसङ्ग्रह) २०६३, बज्जि र बज्जिका (अनुसन्धानग्रन्थ) २०७०, भूमिकैभूमिकामा परशु प्रधान (सम्पादन) २०७१ हुन् । २०७५ सालमा वर्तमान नेपालको प्रागइतिहासको खोजी गरिएको निबन्धसङ्ग्रह जीवाश्म, प्रकाशित गर्ने विचार बनाएको छु । त्यसपछि क्रमशः तथापि….. (निबन्धसङ्ग्रह), असंख्य बुँद (निबन्धसङ्ग्रह), हराउन चाहन्छु (निबन्धसङ्ग्रह), बज्जि संस्कृतिमा लोरिकायन (समग्र तराईमा अति लोकप्रिय तर हराउँदै गएको लोकमहाकाव्य लोरिकायनको अनुसन्धान)लाई प्राथमिकता दिने सोचमा छु ।
१०) जीवनको उत्तराद्र्धमा के छन् यहाँका सिर्जनात्मक योजनाका नवोन्मेषी पहेलीहरु ?
– भन्नु र गर्नु फरक कुरा हुन्, तैपनि भन्नैपर्दा गौतम बुद्धको बारे एउटा पुस्तक लेख्ने विचारमा छु, सोको खाका पनि कोरेको छु । साथै, लोकवार्ताको क्षेत्रमा काम गर्दैछु, सांख्य दर्शनको बारे यसैवर्ष लेखिसक्छु । अब योगदर्शनबारे गहिरो अध्ययन गर्ने र लेख्ने मन छ । अरुले जुन कुरा जसरी लेखे त्यसैगरी लेख्न म चाहन्नँ । फरक दृष्टिकोण राख्न सकिनँ भने म लेख्दिनँ ।
११) जीवनलाई भोग्नुभयो र साहित्यमा अथ्र्याउनु पनि भयो । अँ, के रहेछ त जीवनको परिभाषा ?
– जीवन सुखदुःखको समिश्रण हो । साहित्य जीवनको भोगाइ हो । जीवन संघर्षको अर्को नाम हो । संघर्ष भनेको गति हो । गतिविहीन जीवन मरेतुल्य हो । गतिशील हुनु भनेको कर्म गर्दै जानु हो । कर्म गर्दै जाँदा सधैँ सफलता हात लाग्छ भन्नु छैन । दुःख र सुखको नाम नै जीवन हो । सफलता असफलताको गति नै जीवन हो । साहित्य पनि जीवनको प्रस्तुति हो, जसमा इतिहास लुकेको हुन्छ, वर्तमान हाँसेको हुन्छ र भविष्यप्रति आशावान् बन्छ ।
१२) साहित्यमा यौनको उपस्थिति कस्तो हुनुपर्छ ? यहाँका कृतिमा चाहिँ यौनलाई कसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ ?
– साहित्यमा यौनको उपस्थिति लेखकले चाहेर राखिने कुरा होइन । यौन भनेको हाम्रो जीवन हो, प्रकृतिको नियम हो, सृष्टि हो र सिर्जना हो । यसलाई कसरी लिने अपनाउने कुरो यतिमात्र हो । हामी हिन्दुहरुको शिव र शक्तिको प्रतीक शिवलिङ्ग समागम अवस्थाको प्रकृतिस्थ साधना हो । हामीले स्वीकारेकै छौँ, पूजा गर्दै छौँ, हाम्रो आस्था बन्न गएको छ । मन्दिरका टुँडालका कामकला धार्मिक र प्राचीन कलाको उत्कृष्ट नमुना हो, होइन भनेर कसले भन्न सक्छ ! पुराणमा वर्णित यौनकथा पचाएकै छौँ । समाजले मान्यता दिएको छ विवाह गरेर यौनिक क्रिया गर्न जुन सबैलाई थाहा छ, त्यही कुरो मान्यताविपरीत गरेमा समाजमा अमान्य हुन्छ । यौन मर्यादा हो र मर्यादाको नाममा अति गर्नुभएन । जेमा पनि अति राम्रो होइन । मर्यादा भनेको सीमा हो, सीमाभित्र नेपाली साहित्यमा यौन नभित्रिएको होइन, भित्रिएकै छ । सीमा नाघ्नुभएन र विकृत बनाउनुभएन, यति कुरो ध्यानमा राखे पुग्छ । यौनले सामाजिक विकृति र पारिवारिक खतरा पनि लेराउँछ, साथै यौनकुण्ठालाई दबाएर राख्नु पनि राम्रो कुरो होइन । मर्यादा र शालीनतापूर्वकको सम्बन्ध समाजले, धर्मले, कानुनले स्वीकारेको छ र छलकपटपूर्ण यौनसम्बन्ध राम्रो होइन, यसले खतरा लेराउँछ । म, लेखक समाजको जिम्मेवार सदस्य हुँ, यो सत्य बुझेको छु, यसर्थ मर्यादाभित्र रहेर आफ्ना कृतिमा स्थान दिने गरेको छु ।
१३) राजधानीकेन्द्रित कार्यक्रममा झुण्ड र समूहले एकअर्कालाई नमान्ने र नपत्याउने महारोगलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?
– राजनीतिमा देखा परेको रोग साहित्यमा पनि सल्केको छ । राजधानीमा मात्र होइन, यो रोग चारैतिर छ । झुण्ड र समूह बनाएर नयाँ कुरो भनी नाटक गर्ने जमात हाम्रै देशभित्र छ । तथ्य कुरो ल्याउन भनेर कसैले भन्छ भने “नयाँ कुरो नपच्ने विदेशी दलाल” भनिहाल्छ । उदाहरणका लागि केही कुत्सित मन भएकाहरुले गजलको नाम परिवर्तन गर्न मरिहत्ते गरेका छन् । अब कुरो आउँछ, उनीहरुले चाहेको “रागविराग” त्यस्तो के कुरो छ जो गजलको मान्यताले विश्लेषण–मूल्याङ्कन गर्नमा अपर्याप्त छ । पुराना आधारले जब नयाँ वस्तुको विश्लेषण–मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन, पुराना आधार अपर्याप्त बन्दछ । तब भनाइमा नभएर बरू भन्ने गरेको वस्तुमा पनि परिवर्तन हुन्छ । यस्तो देखिनु र पाइनु भनेको केही स्वार्थी महारोगीको कारणले हो, जुन पानीको फोकाझैँ बिलाएर जान्छ । यस्तैले हो सत्य देख्न नसक्ने र साहित्यमा गुट, उपगुट, समूह सिर्जना गर्न खोज्ने । तर कहिलेसम्म ? असत्य त टिक्न सक्दैन र टिक्दैन नै ।
१४) जनयुद्धअघि र जनयुद्धपछिको साहित्यलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
– कोही जनयुद्ध भन्छन् र कोही आतङ्क भन्छन्, जे भए पनि १७ हजार नेपालीको ज्यान लिएको ‘फेन्टेसी युद्ध’ भन्न मिल्छ कि ? युद्ध प्रारम्भ गर्दाको सिद्धान्तलाई टेकेर केही चलाख नेताहरु नवधनाढ्य बनेको देख्न पाइएको छ । मजस्ता धेरै नेपालीको एकताका आशाको केन्द्रमा भने रहेको थियो र आफ्नो ठाउँबाट सहयोग नगरेको पनि होइन गरियो । स्वेच्छाले या करकापले सहयोग गर्ने धेरै छन् । यस्ता कुराहरु अझसम्म आउनुपर्नेजति नेपाली साहित्यमा आइसकेको छैन । केही विरोधी खेमाकाले लेखेका छन्, केही युद्धमा लागेकाले लेखेका छन्, लेख्नुपर्ने भनेको राज्य र माओवादीबाट पीडित समुदायको पीडा हो, त्यो नेपाली साहित्यमा इमानदारितासाथ आउन सकेको छैन । लेखकहरु अझ पनि डराइरहेका छन्, विरोधीहरुलाई यातना दिने र मार्ने कार्य माओवादी नवधनाढ्यबाट रोकिएको छैन । जबसम्म लेखकले सुरक्षा महसुस गर्दैनन्, तबसम्म साहित्यमा आउँदैन । स्थिति अनुकूल बनेका बेला एकएक कुरा साहित्यमा अवश्य आउने छन् ।
१५) पुरस्कारका बारेमा चलेका हल्ला र सिन्डिकेटलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?
– जो यथार्थमा साहित्यकार हो, उसले आफ्नो धर्म बुझेको हुन्छ । उसमा भएको ऊर्जा र क्षमताअनुसार लेखिरहन्छ, पुरस्कारको पछि पर्दैन । तथाकथित् संस्थाले वितरण गरेका पुरस्कारप्राप्त लेखक पनि देखिएकै छ । तिनीहरुको लेखकीय क्षमता पनि थाहा छ । त्यत्तिकै हल्ला चलेको होइन, हल्लामा पनि केही न केही सत्यता हुन्छ । पुरस्कार कसरी र कसले पायो, देखिएकै कुरा हो । यसबारे अरु केही नभनौँ ।
१६) ‘सर्जक भनेको भगवान् हो’, कतिपय मानिसहरु यसो पनि भन्छन् तर हाम्रा नेपाली सर्जकहरुको भित्रीरुप (व्यक्तिगत जीवन) अध्ययन गर्ने हो भने घिनलाग्दा पनि देखिएका छन्, किन ?
– जीवन र जगत्को सिर्जना गर्न सक्ने क्षमतावान् भएको भनी भगवान्लाई मान्ने गरिएको हो । खैर, दर्शनतर्फ नजाऊँ, सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता सर्जकमा हुनुपर्दछ, यसो भनौँ सर्जकमा हुन्छ । यस आधारमा सर्जकलाई भगवान् भनिएको हुनुपर्छ, यो दृष्टिकोणको कुरा हो । लोक विश्वासमा भनिन्छ नि ‘भगवान् पनि दूधले नुहाएको हँुदैन’, मानवले मानेको भगवान्को चरित्र ठ्याक्कै मानवकै जस्तो छ भनेको त हो नि । वास्तविक सर्जकको स्वरुप दोहोरो चरित्रको नहुनुपर्ने हो, जो अरुको घरमा झ्यालबाट भित्र छिर्छ, उसको घरको ढोका पनि खुलै रहन्छ । यस्तो पाइएको छ । यस्तो हुनु भनेको जीवनलाई बुझ्न नसक्नु नै हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ । वास्तविक स्रष्टा समाजमा उदाहरणयोग्य बन्नुपर्दछ । पाठकले चाहेको चरित्र भनेको त्यो हो ।
१७) अहिले नेपाली साहित्यको कुन विधा ओझेलमा परेको छ ? हल्ला गरे पनि कुनकुन विधाहरुलाई सर्जकले नै न्याय गर्न सकिरहेका छैनन् ?
– यस प्रश्नको उत्तर सहज छ जस्तो मलाई लाग्दैन । पाठकको हैसियतले भन्नुपर्दा पनि आफूलाई आवश्यक पर्न आएको पुस्तक अध्ययन गर्न प्राथमिकता दिने हँुदा धेरै पढ्न सकेको छैन । आफू समालोचक नभएको हँुदा गहरिएर हेरेको पनि छैन । यसर्थ, यस प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने सामथ्र्य ममा छैन ।
१८) नेपाली साहित्यिक पत्रपत्रिकाहरुको वर्तमान मुखडा कस्तो देख्नुहुन्छ ? थेसिसलाई छोट्याएर वा तोडमरोड गरेर गुणग्राही समालोचना लेख्ने पारम्परिक साहित्यिक पण्डितहरुलाई यहाँ के भन्नुहुन्छ ?
– नेपाली साहित्यले प्रतिनिधि पत्रिका चाहेको छ, जसमा रचना भनसुनको भरमा, चिनजानको भरमा नभएर क्षमताको आधारमा छापियोस् । यो अभाव सहजै चाँडै पूरा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । नेपाली साहित्यिक पत्रपत्रिकाको स्थिति समग्रमा अझसम्म व्यावसायिक बन्न सकेको छैन । यसो हुँदा राम्रो त भन्न सकिन्न । साहित्यिक पत्रिकाका सम्पादकमा खासगरी रचनालाई हैन लेखकलाई हेर्ने दृष्टिकोण बनाएर जबसम्म बाँचिरहन्छ, तबसम्म कायापलट होलाजस्तो लाग्दैन । एकातिर साहित्यिक पत्रिका भनेपछि एक–दुईको कुरा छाडौँ, किनेर पढ्ने संस्कृति बनिसकेको छैन । गुजारा चलाउने प्रवृत्ति हाबी हुँदा स्थिति दयनीय छ । निजी स्तरमा एउटा बलियो पत्रिका चलाउन सक्ने प्रकाशनको नितान्त खाँचो छ । वितरण सहज र सर्वसुलभ हुनसक्ने हो भने नेपालमा एउटा राम्रो पत्रिका मजाले चल्न सक्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ । बरू, केही दैनिक पत्रिकाले राम्रा साहित्य पस्किने गरेको पाएको छु । थेसिसलाई छोट्याएर वा तोडमरोड गरेर गुणग्राही समालोचना लेख्ने पारम्परिक साहित्यिक पण्डितहरुलाई भनेर नै के हुन्छ र ! विद्यार्थीहरुका लागि गाइड लेख्छन्, मेरो समालोचनाको यतिवटा कृति भो भन्छन्, मख्ख पर्छन् । त्यस्ताको आफ्नै संसार छ, मख्ख पर्न दिनुस् । तिनीहरुबाट नेपाली साहित्य उँभो लाग्ने होइन, साथै आजको अवस्थामा आएको पनि होइन ।
१९) नयाँहरुको लेखन दमबाट नेपाली साहित्यको भण्डारले असल कृति पाएको छ वा कागजको नाशमात्रै भएको छ, के छ यहाँको विचार ?
– नयाँ कसलाई भन्ने र समयसीमा कतिलाई मान्ने, यो साधारण कुरो होइन । प्रश्न देखिन्छ नेपाली साहित्यको असल कृति, यो हिजो पनि लेख्ने अग्रजहरु धेरै हुनुहुन्थ्यो तर नाम संकलन गर्दा हामी केहीको मात्र लिन्छौँ, किन ? किनभने असल कृति लेख्ने त थोरै थिए । आज पनि त त्यही हो, लेख्दै गर्ने जमात अवश्य धेरै छ, कोही जानेर लेखिरहेका छन् त कोही नजानेर लेखिरहेका छन् । यस जमातमा राम्रो लेख्ने छँदै छैन भनेर म भन्न सक्दिनँ । युवापुस्तामा राम्रा लेख्ने पनि छन् । जहिले पनि राम्रा लेख्ने अपेक्षाकृत कमै हुन्छन् । कारण साहित्यले साधना खोज्छ, साधना गर्नेहरुमध्ये केही राम्रा लेख्ने बन्छन् र तिनीहरुबाट राम्रो कृति आउँछ, आउँदै छ । गहन अध्ययन र लेखनमा इमानदारी नै साधना हो, गहन अध्ययन गर्नेमा पनि ग्रहण गर्नसक्ने क्षमता आआफ्नो हुन्छ, केहीमा भने विलक्षण प्रतिभा हुन्छ ।
२०) यतिका मान्छेको भीडमा यहाँले नै लेख्नुपर्ने के त्यस्तो चीज छ ?
– यो कुरा त पक्का हो, अमूकले नलेख्ने हो भने त्यही कुरो त्यस्तरी नै त आउँदैन, जसरी नदीमा त्यही पानीमा फेरि हामी नुहाउन सक्दैनौँ । मैले नै लेख्नुपर्ने त्यस्तो खास कुरो त मेरो आफ्नो निजी विचारमात्र हो । जो मबाहेक अरुले व्यक्त गर्न सक्दैन, कल्पनामात्र गर्न सक्छ । लेख्ने कुरो पनि लत हो– कसैमा तास खेल्ने, कोही मदिरा सेवन गर्ने, कोही धूमपान गर्ने यस्तैयस्तै धेरै लत छन् । प्रायः मानिसहरु कुनै न कुनै लतमा फसेका छन् । मलाई पनि लत लाग्यो, अध्ययन र लेखन गर्ने । कुनै लत समाजमा तिरस्कृत हुन्छन् भने मलाई लागेको लतले समाजमा सम्मान दिलाएको छ । लेखन पनि लत भएको हँुदा लेख्दैछु, लेखिरहन्छु ।
२१) लेखेर के पाउनुभयो र के गुमाउनुभयो ?
– लेखेर सम्मान पाएको छु । तपाईं जुन संवाद गर्दै हुनुहुन्छ, यो पनि लेखेर पाएको उपलब्धि त हो । गुमाउने कुरो त त्यस्तो केही छ जस्तो लाग्दैन ।
भानु तिमी फेरि जन्मिँदै छौ रे !